SAINT LUCIA: 100 Percent Recovery of COVID-19 Cases | Safety
Location: musha » Kutumira » chengetedzo » MUTSVENE LUCIA: 100 Percent Kudzoreredzwa kweCOVID-19 Mhosva
Kubva muna Kubvumbi 21, 2020 iyo WHO yakashuma huwandu hwenhamba mbiri, 2, 397 dzakasimbiswa dze COVID-217 pasi rese ne19, 162 vakafa. Ikozvino pane makumi masere nemakumi masere nemasere, makumi masere nemapfumbamwe nematatu akasimbiswa matunhu mudunhu reAmerica. Dunhu rakakuvara rinosanganisira Dominican Republic (956), Haiti (893), Barbados (119), Jamaica (4,964), Cuba (47), Dominica (75), Grenada (196), Trinidad neTobago (1087), Guyana (16) ), Antigua naBarbuda (13), Bahamas (114), Saint Vincent neGrenadines (63), Guadeloupe (23), Martinique (60), Puerto Rico (12), US Virgin Islands (148), neCayman Islands (163) ).
Kubva muna Kubvumbi 22, 2020, Saint Lucia ane huwandu hwese gumi nemashanu akasimbiswa kesi dze COVID-15. Kusvika pari zvino, dzese dzakanaka kesi dzeCOVID-19 muSaint Lucia dzakapora, pamwe nemachete maviri akasara aive ari ega akapiwa zvakashata COVID-19 bvunzo uye kubvira aburitswa muchipatara. Izvi zvino zvinoisa Saint Lucia pane zana muzana kudzoka kwezvese zviitiko zveCOVID-19. Pakati pezviitiko gumi neshanu Saint Lucia yakanyorwa vaive vanhu vakawira mukati mechikamu chengozi huru nekuda kwevamwe kuve vakuru pamwe nekurarama nechirwere chisingaperi. Naivowo vakaporeswa zvakanaka vasina zvinonetsa kana kuda kutarisirwa kwakanyanya.
Kuongororwa kweLabhoritari kwe COVID-19 kunoenderera mberi kuitiswa zvese imomo pamwe nerutsigiro rweCaribbean Public Health Agency Laborator. Saint Lucia yakagadzirisa nzira yayo yekuyedza nekuyedza yakawedzera nhamba yemasampuli kubva kumakiriniki ekufema enharaunda. izvi zvaizotibatsira mukuongorora kwe COVID-19 munharaunda.
Musande Lucia anoenderera mberi nekudzima kwakasarudzika uye paawa yekudzora kwemaawa gumi kubva na10 pm kusvika 7 am Isu tinoramba tiri panzvimbo yakaoma kwazvo mukuitwa kwemhinduro yenyika kutyisidziro yeCOVID-5. Huru hwakakura hutano hweveruzhinji uye magariro matanho akaitwa mukuyedza kutyora kufambiswa kwe COVID-19 apo mukutapurirana kwenyika kwakacherechedzwa. Veruzhinji vanofanirwa kucherechedza kuti dzakawanda zvezviyero izvi zvinoda kutsigirwa mukuyedza kuzadzisa mazinga epasi eCOBV-19 munyika. Dzimwe nhanho dzakatangwa dzinosanganisira kuvharwa kwechikoro, kuganhurwa kwenyika kugadzirisa kufamba kwevanhu, kuvharwa kwemabhizimusi asiri akakosha, kurambidzwa kwekufamba, kudzimiswa kwenyika kusaruramisa uye kuisa nguva yekudzoka kwemaawa makumi maviri nemana.
Matanho anokurudzirwa kutungamira njodzi dzevanhu anosanganisira kushandisa masiki, kuyedzwa, kuzviparadzanisa nevamwe, kurapwa uye kuchengetedza vanhu vanorwara uye kutorwa kwehutsanana nedzimwe nzira dzekudzivirira hutachiona. Sezvinoonekwa mune zhinji dzenyika dzakasimukira, kunyangwe paine kuderera kuri kuwanda kwezviitiko uye kumonyoroka kweiyo curve, pakave nenguva dzekutangazve mumatambudziko avo. Kana matanho akasununguka uye vanhu vobva vave nehukama muhukama izvi zvinopa mukana kumaturu madiki edenda ayo anoonekwa nehutachiona hwehutachiona hwakaderera. Izvo nerubatsiro rweruzivo urwu tinocherekedza kukosha kwekuita ongororo yenjodzi kuti usvike pane humbowo hwakavakirwa nzira mukuzorodza matanho nepo tichivimbisa kugona kuona nekugadzirisa kumuka kunogona kuitika mumatare achienda kumberi.
Wese munhu anobvunzwa kuti acherechedze kuti sekuti masevhisi akakosha achiitwa kuti awanikwe kuruzhinji nhungamiro dzekupararira munharaunda dzinofanirwa kutevedzwa nguva dzese mukufarira hutano nekuchengetedzwa kweruzhinji. Muchirevo cheizvi isu tese tinoda kuyeuchidzwa kuti kutyisidzirwa kwe COVID-19 kuchiripo uye kucharamba kuve nesu kwechinguva. Mimwe yemitemo yenyika inosanganisira: kugara pamba zvakanyanya sezvinobvira, kunze kwekunge chiri chekudya kana zvekurapa, dzivisa zviitiko zvechaunga uye kuungana kwevanhu, kudzidzira kutenderera kwenzanga uye hutsanana hwemunhu. Veruzhinji vanorayirwa zvakare kuti vasaende kunzvimbo dzeveruzhinji vane zviratidzo zvakaita sefuru zvinosanganisira kupisa muviri, kukosora nekuhotsira. Paunenge uchishanyira supamaketi kana nzvimbo dzeveruzhinji rega kubata zvinhu kunze kwekunge iwe uchida kuzvitenga. Isu tinoda kutora maitiro ehunhu kuenda kumberi mune ino nyowani COVID-19 nharaunda.
Kunyangwe hazvo, zvitoro zvehurdware zvakavhurwa mukuyedza kugadzirisa zvashata zvemumba uye nekuwedzera kugona kwekuchengetedza mvura, veruzhinji vanoyeuchidzwa kuti isu tichiri padanho repasi rose. Ingosiya imba yako kune zvinhu zvakakosha.
Kumwe kurudziro iyo veruzhinji vanokumbirwa kutevedzera ndeyekushandisa kumeso kumeso kana sikafu kana uchienda kunzvimbo dzeruzhinji senge muzvitoro. Chiso chemask kana chirafu zvinogona kushandiswa kudzora sosi nekuderedza mukana wekuratidzira kubva kune vanhu vane hutachiona panguva ye "pre-symptomatic" nguva. Iyi nhanho ichatsigira ikozvino kuedza kwekuchengetedza hutano uye kuchengetedzeka kwevagari vedu.
Zvisinei kuti masiki echiso abudirire mukuderedza hutachiona, anofanirwa kugara achishandiswa sekurudziro.
Tinoenderera mberi nekuyambira veruzhinji kuti vatarise pamusoro pekuchengetedza kwemazano akajairwa ekudzivirira kupararira kwehutachiona. Izvi zvinosanganisira: - kugeza mawoko nguva dzose nesipo nemvura kana doro zvakacheneswa nemaoko zvisina sipo nemvura. - vhara muromo nemhino nematukisi anoraswa kana zvipfeko kana uchikosora nekuhotsira. - dzivisa kusangana padyo nemumwe munhu anoratidza zviratidzo zvehosha yekufema sekukosora nekuhotsira. - tsvaga kurapwa uye ugovane nhoroondo yako yekufamba nemupi wako wekuchengeta hutano kana uine zviratidzo zvinoratidzira nezvechirwere chekufema kungave panguva kana mushure mekufamba.
Dhipatimendi rehutano nehutano richaenderera mberi nekupa zvinogara zvichigadziriswa pane COVID-19.
Antigua Andiguya neBhabhudha Barbados Caribbean Covid-19 Kiyuba Dhominika Ripabhuriki Dhominika Grenada Grenadines Guyana Haiti utano Jamaika Martinique Pota Riko Tobago Trinidad Trinidhadhi neTobhago Virgin Islands
CAYMAN ISLANDS: Gadziridza pane COVID-19